Daaci oo dawladdu dammaanad ku sii daysay | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Daaci oo dawladdu dammaanad ku sii daysay
Daaci oo dawladdu dammaanad ku sii daysay
War degdeg ah oo imminka soo dhacay ayaa sheegaya in taliska guud ee ciidamadda ammaanka dawladdu ay dammaanad dib ugu siidaayeen guddoomiyihii hore ee degmada Waddajir, Axmed Xasan Caddow ‘Axmed Daaci’ iyaga oo xushmeynaya baaqyo ay u gudbiyeen salaadiin iyo siyaasiyiin kasoo jeeda Muqdisho, kuwaasoo dadaallo xooggan u galay sidii loo siideyn lahaa Axmed Daaci.
Daaci ayey dawladdu xirtay bartamihii bishii hore waxaana baaritaanno ku waday muddo 35 maalmood ah saraakiisha laanta sirdoonka iyo nabadsugidda qaranka ee NISA.
Goor sii horreysay ugu yaraan 15 qof oo ay ku jireen dad rayid ahaa ayaa ku dhintay isku dhac dhex maray ciidamadda ammaanka oo kaashanayey kuwa Midowga Afrika ee AMISOM iyo Axmed Daaci, si hub ka dhigis loogu sameeyo dadka weli hubaysan ee aan ka amar qaadan dawladda dhexe ee Soomaaliya.
Israsaasayntaasi waxay timid kaddib markii ay ciidamaddu weerareen hoyga Axmed Daaci ee degmada Waddajir, hase ahaatee hawlgalka ayaa dhacay iyada oo saraakiisha dhinaca ammaanka ee dawladda Soomaaliya ay horey shaaca uga qaadeen in si rasmi ah loo bilaabay qorshe hub ka dhis guud looga sameynayo caasimadda.
Dhinaca kale, hawlgalkaasi ayaa lagu soo beegay xilli dhawaan xukuumaddu ay meel marisay hindise hubka looga dhigayo shacabka loona sii gudbiyay golaha barlamaanka Soomaaliya si cod loogu qaado qorshehaasi.
Soomaaliya ka ganacsiga hubka ayaa taariikh dheer ku leh gaar ahaan caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho oo mar ahaan jirtay magaalo ay si madaxbannaan u maammulaan hoggaamiye kooxeedyadii meesha laga saaray sannadkii 2006-dii.
Previous articleMuqdisho oo dad lagu ‘qabqabtay hawlgal’ socda
Next articleSoomaaliya iyo Kenya oo ka wada hadlaya badda